Waad ku mahadsantahay xiisaha aad u leedahay inaad ka shaqeyso Xarunta McKnight Foundation. Codsigaaga ayaa loo gudbiyay si dib loogu eego. Haddii aan helno shahaadooyinkaaga u dhigma booskan, waan kula soo xiriiri doonaa. Waad ku mahadsantahay DULQAADKAAGA.
Machadka McKnight wuxuu doonayaa inuu noqdo loo shaqeeye shaqaale kala duwan oo loo dhan yahay. Si loo fahmo tirada dadka iyo shaqaalaheenna waxaan codsaneynaa inaad si ikhtiyaari ah u buuxiso foomka hoose.
Codsadayaasha shaqada waxaa lagu casuumay inay wadaagaan xogta dadka. Markaad fidineyso casuumaadan waxaa sidoo kale lagugula talinayaa: (a) inaadan waajib kugu ahayn inaad ka jawaabto, laakiin laga yaabo inaad mustaqbalka sameyso haddii aad doorato; (b) jawaabaha shaqsiyeed waxay ahaan doonaan kuwo qarsoodi ah marka laga hadlayo Kheyraadka Aadanaha; iyo (c) jawaabaha waxaa loo adeegsan doonaa si loo fahmo loona wadaago xogta guud ee dadka isla markaana loo qiimeeyo dadaalada ku wajahan meel shaqo oo kala duwan.
Fadlan buuxi macluumaadka hoosta laga codsaday. Waad ku mahadsantahay wada shaqeyntaada.
Ma waxaad ka soo jeeddaa Isbaanish, Laatiino / Latinx, ama asal ahaan Isbaanish?
Sameeyo in aanad ka jawaabin
Midkee soosocda midkee matali kara jinsiyadaada ama jinsiyadaada?
Aasiyaan Ameerikaan ama Jasiirad Baasifig ah
Black ama African American
Dhaladka Mareykanka ama Dhaladka Alaska
Midkee soosocda kuwa ugufiican ee matalaya nooca galmadaada?
Gay ama Lesbian
Midkee soosocda midkee sifiican u sharaxaya aqoonsigaaga jinsiga?
Jinsiga jinsiga, jinsiga oo la balaadhiyo, ama kuwa aan ahayn
Ma u aqoonsan tahay qof naafo ah?
Ma leedahay xaalad ruug caddaa ah?
Jinsiyada iyo Jinsiyadaha
Dadka aqoonsada hal ama in ka badan jinsiyado ama qowmiyado asal ahaan ka soo jeeda Bariga Aasiya, Koonfur-bari Aasiya, ama qaaradaha Hindiya. Tusaalooyinka kooxahan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, Shiinaha, Filibiin, Aasiyaan Hindi ah, Fiyetnaam, Kooriyaan, iyo Jabbaan. Qeybta sidoo kale waxaa ku jira kooxo sida Baakistaan, Kamboodiya, Hmong, Thai, Bengali, Mien, iwm ama dadka aqoonsada hal ama in ka badan jinsiyado ama qowmiyado asal ahaan ka soo jeeda Hawaii, Guam, Samoa, ama Jasiiradaha kale ee Baasifigga. Tusaalooyinka kooxahan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, Dhaladka Hawaii, Samoan, Chamorro, Tongan, Fijian, iyo Marshallese. Qeybta waxaa sidoo kale ku jira kooxo sida Palauan, Tahitian, Chuukese, Pohnpeian, Saipanese, Yapese, iwm.
Dadka u aqoonsada hal ama in ka badan jinsiyado ama qowmiyado asal ahaan ka soo jeeda mid kasta oo ka mid ah kooxaha midab-Madow ee Afrika. Tusaalooyinka kooxahan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, African American, Jamaican, Haitian, Nigerian, Ethiopian, iyo Somali. Qeybta waxaa sidoo kale ku jira kooxo sida Ghana, South Africa, Barbadian, Kenya, Liberian, iyo Bahamian.
Isbaanish, Latino / Latinx ama Isbaanish asal ahaan
Dadka aqoonsada hal ama in ka badan jinsiyado ama qowmiyado asal ahaan ka soo jeeda Mexico, Puerto Rico, Cuba, Central iyo South America, iyo dhaqamada kale ee Isbaanishka. Tusaalooyinka kooxahan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, Mexican ama Mexican Mareykan ah, Puerto Rican, Cuba, Salvadoran, Dominican, iyo Kolombiya. “Hispanic, Latino or Spanish origin” sidoo kale waxaa ku jira kooxo sida Guatemalan, Honduran, Spaniard, Ecuadorian, Peruvian, Venezuelan, iwm. Haddii qofku aanu ka soo jeedin Hispanic, Latino, ama Isbaanish, ku jawaab “Maya, ma aha Isbaanish, Latino , ama Isbaanish asal ahaan ”.
Dadka isku aqoonsada laba ama in ka badan oo hayb isir ah.
Dadka tilmaamaya mid ka mid ah dadyowgii asalka ahaa ee Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika (oo ay ku jiraan Bartamaha Ameerika) iyo kuwa ilaaliya ku xirnaanta qabyaaladda ama ku xirnaanta bulshada. Waxaa ku jira dadka u aqoonsada inay yihiin "Hindida Mareykanka" ama "Dhaladka Alaska" waxaana ku jira kooxo ay ka mid yihiin Navajo Nation, Blackfeet Tribe, Mayan, Aztec, Native Village oo ka tirsan Barrow Inupiat Dowlad-dhaqameedka, iyo Nome Eskimo Community.
Dadka aqoonsada hal ama in ka badan jinsiyado ama qowmiyado asal ahaan ka soo jeeda Yurub, Bariga Dhexe, ama Waqooyiga Afrika. Tusaalooyinka kooxahan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, Jarmal, Irish, Ingiriis, Talyaani, Lubnaan, Masaari, Boolish, Faransiis, Iiraan, Slavic, Cajun, iyo Kalday.
Dadka awoodda u leh soo jiidashada — xagga galmada, jacaylka, shucuurta, ama wixii kaleba - ee dadka isku jinsi iyo jinsiyo kala duwan iyo / ama aqoonsiga jinsiga laftooda.
Dadka shucuur ahaan, jacayl ahaan, iyo / ama muuqaal ahaan u soo jiita dadka ay isku jinsiga yihiin.
Dadka shucuur ahaan, jacayl ahaan, iyo / ama muuqaal ahaan u soo jiita qof jinsi ahaan ka soo horjeeda.
Erey dallad ah oo loogu talagalay dadka aan si gaar ah u aqoonsan inay yihiin heterosexual, waxaa ku jiri kara dadka u aqoonsada inay yihiin khaniis, lesbian, bisexual, asexual ama hanuun galmo dareeraha.
Jinsiga jinsiga, jinsiga ama jinsiga:
Dadka leh fikrad balaaran oo muujineysa muujinta jinsiga iyo aqoonsiga wixii ka dambeeya waxa loo arko inay yihiin caadooyinka lamaanaha ee laga filayo bulshadooda ama xaaladdooda; ama dadka isku tilmaama midkoodna, labadaba, ama isku darka lab ama dhadig.
Dadka leh aqoonsi jinsi oo aan daruuri u dhigmin jinsigooda loo qoondeeyay markay dhashaan ama ka gudbaya rajooyinka caadiga ah ee aqoonsiga jinsiga ama muujinta; oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, dadka u aqoonsada inay yihiin lab ama dheddig, jinsi, nooc jinsiyeed, jinsi kaladuwan, iyo anshax xumo.
Qofka naafada ah
Dadka qaba naafonimo jireed ama maskaxeed taas oo si weyn u xadideysa hal ama in ka badan oo firfircoon (ama hawlo) nololeed; diiwaanka naafonimada noocaas ah; ama loo arko inuu qabo cillad noocaas ah. Ujeeddooyinka qeexitaankan, dadka naafada ah (dadka) aad ayey u xaddidan yihiin haddii ay u badan tahay inay la kulmaan dhibaato xagga sugidda, haysashada, ama horumarka shaqada naafonimada (iinta) awgeed.
Halyeey Curyaan ah
Dadka ka soo shaqeeyay waajibaadka milatari ee Mareykanka oo xaq u leh magdhowga naafada (ama kan laakiin helitaanka mushaharka hawlgabka milatariga wuxuu xaq u yeelan doonaa magdhawga naafada) iyada oo la raacayo sharciyada uu maamulo Xoghayaha Arimaha Halyeeyada, ama laga saaray ama laga sii daayay waajibaadka firfircoonida darteed naafonimo ku xiran adeegga.
Hantida kale ee la ilaaliyo
Dadka ka soo shaqeeyay waajibaadka firfircoon ee militariga Mareykanka intii lagu jiray dagaal, ama olole ama safar loogu talagalay in lagu aqoonsado calaamadda ololaha iyada oo loo marayo sharciyada ay maamusho Wasaaradda Difaaca.
Dhowaan Soodhawayste ah
Dadka kala go'ay muddada saddexda sano ah ee ka bilaabatay taariikhda bixitaankooda ama laga sii daayay waajibaadkooda firfircoon ee milatariga Mareykanka.
Halyeeyga Bilada ee Ciidamada Qalabka Sida
Dadkii, intii ay gudanayeen waajibaadka fir fircoon ee militariga Mareykanka, kaqeyb qaatay howlgalka militariga Mareykanka ee helay billadda adeegga Ciidamada Qalabka Sida.